कोरोनाले थला परेको अमेरिकाबाट पहिलोपटक आयो यस्तो राहतको खबर, अमेरिकी जनता खुसी – Jagaran Nepal
कोरोनाले थला परेको अमेरिकाबाट पहिलोपटक आयो यस्तो राहतको खबर, अमेरिकी जनता खुसी
काठमाडौँ । विश्वभर तहल्का मच्चाईरहेको कोरोना भाइरस कोभिड १९ महामाविरुद्ध लडीरहेको अमेरिकाबाट पहिलोपटक राहतको खबर आएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) ले कोरोनाभाइरसको भ्याक्सिनको क्लिनिकल परीक्षणका लागि अनुमति दिएको छ ।
एफडिएका प्रमुख स्टिफेन हानले चार किसिमका खोपहरुको क्लिनिकल परीक्षणका लागि अनुमति दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अरु छ किसिमका खोप पनि परीक्षणको क्रममा रहेको बताए । अमेरिकी प्रशासनले सन् २०२१ को जनवरीसम्ममा कोविड–१९ का लागि ३० करोड भ्याक्सिन उत्पादन गरी बितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैबीच अमेरिकाका सङ्क्रामक रोगका एकजना वरिष्ठ विज्ञ डा. एन्थोनी फाउचीले कोरोनाभइरसको सङ्क्रमण रोकथाममा गरिएको प्रयास पर्याप्त नभएको बताएका छन्। आउँदा दिनहरू अमेरिका निम्ति थप चुनौतीपूर्ण हुने उनको ठम्याइ छ।
थप प्रभावकारी उपाय नअपनाइएमा अमेरिकामा अहिलेको सङ्क्रमण दरभन्दा दोब्बर बढी अर्थात् दैनिक एक लाख मानिस सङ्क्रमित हुनसक्ने डा. फाउचीको डरलाग्दाे चेतावनी छ। अहिले अमेरिकामा दैनिक सरदर ४० हजार मानिस सङ्क्रमित हुने गरेका छन्।
उनले नागरिकस्तरबाट पनि सङ्क्रमण कम गर्न सामाजिक दूरी राख्ने र मास्क लगाउने नियम पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए। अमेरिकी सिनेटको समितिद्वारा आयोजित सुनुवाइमा उनले भने, “हामीले अहिले सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ भन्ने स्पष्ट छ।”
अमेरिकाको दक्षिण र पश्चिमका राज्यहरूमा सङ्क्रमण बढिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । डा. फाउचीले फ्लोरिडा, एरिजोना, टेक्सस र क्यालिफोर्नियालाई अहिले तीव्र गतिमा महामारी फैलिएको राज्यको रूपमा उदाहरण दिए।
त्यस क्षेत्रका १६ वटा राज्यले व्यवसाय र कारोबार खोल्ने आफ्नो पूर्व योजना स्थगित वा फिर्ता लिएको समाचार संस्था सीएनएनले जनाएको छ। डा. फाउचीका अनुसार देशका केही भागमा रोकथामको राम्रो काम भइरहे पनि देशको एउटा भागमा प्रकोप रहँदा अरू पनि जोखिमा परेका छन्।
उनले भने, “हामीले जहाँ सङ्क्रमण बढी छ त्यहाँमात्र ध्यान दिन सक्दैनौँ त्यसैले सिङ्गो देश नै जोखिममा छ।” उनले सबै अमेरिकीलाई नि:शुल्क वितरण गर्ने गरी मास्क उत्पादन गर्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह पनि गरे।